Xiliyada uu damco ninkaaga in uu kala guursado naag kale | Gaaloos.com
Home » dardaaran » qoyska » Talooyinka jaceylka » Xiliyada uu damco ninkaaga in uu kala guursado naag kale
Xiliyada uu damco ninkaaga in uu kala guursado naag kale
Shaki kama taagno in ninkasta uu maskaxda ku hayo mar uun in uu guursan doono xaas 2aad, halka dalalka aan islaamka aheen ninka loo ogol yahay in uu sameesto girlfriend taas oo la macnaha si dad badan in uu ninka leeyahay xaas 2aad.
waa su'aal waa xiliyadee xiliga uu ninkaaga ku fakiro in uu kula guursado naag kale, mase maku fakirtay waxyaabaha suurta galka ah een kuu soo wadno, hadaba maanta www.daalac.com wuxuu idin wadaa xiliga uu ninkaaga damci karo qof kale oo dumar ah.
Ragga qaar ayaa ah kuwa dareenkooda aan xakameen karin jecel in markasta ay heleen hoosha kala dhexeysa naagtiisa, ragga qaar ayaa ku fikira kala go'a ku yimid arinta in ay muhiim tahay in uu raadiyo qof kale isaga oo ka fikiraya dareenkiisa, dhacdadaan ayee qabsataa dumarka bil gudaheed 2 mar ku dhaca xeydhka ama mida xeydhkuudu uu gaaro isbuuc
2. Xiliga Uurka (Xaamilada).
In badan oo ka tirsan ragga ayaa aaminsan in ay naag uur leh aysan ka haboooneen utagis iyo u dhawaasho, waqtiga uurka oo ah mudo bilooyin ah iyo dhalmada oo maalmaha ayaa ragga qaar ku fikiraan in ay guursadaan qof kale.
3. Xiliga aad dhalmo dhigto (da'daada waynaato)
Title: Xiliyada uu damco ninkaaga in uu kala guursado naag kale